Is-Maamulada Shabelle iyo Asal si deg-deg ah waa in loo billaabaa! | Markacadey.net Facebook
Warka oo Video	6:35 pm » Wasiirkii Dastuurka oo sheegay in goor kasta ay dagaalo ka qarxi karaan Magaalada Kismaayo 6:24 pm » Nabadoon Caan ah oo lagu dilay Gobolka Hiiraan 12:36 pm » Sarkaal ka tirsan Dowladda oo maanta ka badbaaday dil si layaab leh looga soo shaqeeyay 11:31 am » Raa’isal Wasaaraha oo la kulmay Maxamed Saalax Anadif iyo Saraakiil Amisom ka tirsan “Daawo Sawirada” 11:20 am » Sarkaal u shaqeynaayay Hay’adda SDR oo ay dileen niman hubeysan 10:20 am » WAR DEG DEG: Raa’isal Wasaare Saacid oo ka badbaaday mooshinkii laga keenay 8:33 am » Taliska Amisom oo markii ugu horeysay sheegay inaan wax hub ah lagu qaadan karin Magaalada Muqdisho 8:22 am » Wararkii ugu dambeeyay baabuur ay la socdeen Ciidamada Dowladda oo wadada loo galay 8:12 am » Itoobiyo oo cadeysay inaysan wax lug ah ku laheyn Siyaasada cakiran ee Magaalada Kismaayo 7:25 am » Raa’isal Wasaaraha oo maanta kawaanka saaran, lagana cabsi qabo in daaqada laga saaro By: Riwaan Haji // Feb 28 2013 at 11:43 pm // 873 Reads // Article & Opinion Is-Maamulada Shabelle iyo Asal si deg-deg ah waa in loo billaabaa! Share Tweet
Waa hawsha dhammays-tirka Federaalnimada Soomaaliya
Waxaa maanta billaabmay hawsha lagu sammaynayo Is-Maamulka Jubba. Waa hawl in badan la sugayay. Waana tallaabo horumar ah sammaynta Is-Maamulka Jubba oo hadda hawsheeda lagu guda jiro. Shacabka reer Jubba waxaan ku boogaadinaynaa tallaaabadan qaybta ka ah hawlaha dhammaystir ka Federaalnimada Soomaaliya. Waxaan lee nahay waa hal tallaabo oo dhinaca saxa ah loo qaaday.
Si barbarro ah dadka dega nawaaxiga Shabelle iyagana sidaas oo kale waa inay degdeg u billaabaan barooseeska hawsha sammaynta Is-Maamul lagu magacaabo Shabeelle oo ka kooban Hiiraan, Shabeellada Dhexe, Dhulka deexda ah ee Shabeelada Hoose – wixii ka bari ah Webiga Shabeelle illaa Xaramka, Hoombooy, bariga Jilib iyo bariga Jammaame inta laga gaarayo Jumbo oo ah meesha Webi Juba ka galo Badda Hindiya. Is-Maamul kaan waxuu qeexayaa Is-Maamulka bedka Is-Maamulka Jubba oo aan u gudbi doonin bariga Webiga Jubba.
Sidoo kale waxaa barbarro la noqon doonta sammaynta Is-Maamulka Asal oo ah isu-tagga gobollada Bakool, Bay, Dooy iyo Shabeelada Hoose. Is-Maamulka Asal wuxuu u dhexaynayaa labada Webi. Waa dhulka u dhexeeya bariga Baardheere illaa Qoryooleey; dhinaca waqooyigana waa dhulka u dhexeeya Baalliga Teed illaa Arbaay Cabdi, Dhaay Tobaako iyo Xaramka koofur ahaan. Hawshaan dadka deegaanada waa inay ka soo fushaa: Min Hiiraan illaa Jumbo oo ah Shabeelle iyo Asal oo ah Waqooyiga Xuddur illaa Arbaay Cabdi iyo Dhaay Tobaako oo Yaaq Baraawe kaga aaddan koofurta. Mar kasta hawshaan waa hawl la iska rabo inay fusho; dib-u-dhigasho ma laha mar haddii Jubba hawsheeda ay socoto.
Guddiyada xubnaha Baarlamanka Somaliya oo arrimaha maamul sammaynta loo xil saaray hawshaan xasaasiga ah waa inay ku waqtiyeeyaan hawshooda la socodka hawsha Jubba iyo kuwa dhawaanahaan ka billaabmi doono. Sidoo kale Komishanka hawsha xuduudaha Is-Maamulada iyo tiradooda sida ugu dhaqso badan waa inay ku hawl galaan.
Ugu dabmaynta waa in dib looga dhicin Hawsha Is-Maamulka Jubba uu wado. Hawlaha kale oo ay ku soo baxayaan Is-Maamulada Shabeelle iyo Asal waa inay la jaan qaadaan Jubba iyo Khaatum-Maakhir.
Tusaale Qurxoon ka qaado xiddigihii beri samaadki. Axmed Madoobe oo si cad uweeraray Dawlada Somaliya Muwaadin Soomaaliyeed oo lagu qaarajiyay Magaalada Jubba Kismaayo ma Dawlada Somaliya ayaa maamusha Mise Maamulka Axmed Madoobe? Dr Saacid:Hadii dadka Gedo doonayaa ku biirida Jubbaland waan ku taagereynaa Aqriso: Dowladda Somaliya oo cadeysay mowqifkeeda ku aadan Arrimaha Kismaayo Ergo ka mid ah kuwii ka qeyb galayey Shirka Jubbaland lagu dhisayo oo iskaga baxay madasha Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of MARKACADEY.net. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards. comments